कसरी छनोट गर्ने राम्रो घडेरी ? वासुदेव शास्त्रीको टिप्स – newslinesnepal
कसरी छनोट गर्ने राम्रो घडेरी ? वासुदेव शास्त्रीको टिप्स
प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०७७, मंगलवार २०:१६
प्राचिन वैदिक वास्तुशास्त्रमा घर तथा व्यवसायिक भवन बनाउने घडेरीका लागि उपयुक्त अनुपयुक्त भूमि छुट्याउन निम्न कुराको गहिरो बिचार विमर्श गरेको पाइन्छ ।
घर बनाउँदा लागेको घडेरीको माटोको रङ कस्तो छ भनेर वास्तु–शास्त्रका आधारमा पाँच तरिकाले परीक्षण गरिन्छ
बीचमा अग्लो एवं चारैतर्फ भिरालो भएको घडेरीलाई कूर्मपृष्ठ (कछुवा ढाडे) घडेरी भनिन्छ । यस्तो भूमिमा आवास बनाउनाले जीवनमा सुख, समद्धि, उल्लास र बलवृद्धि हुन्छ ।
जुन घडेरी चार कुना उठेको छ र बीचमा सामान्य होचो छ, त्यस्तो घडेरीलाई गजपृष्ठ (हात्तीढाडे) घडेरी भनिन्छ । यस्तो घडेरीमा निवास गर्नाले आयु, आरोग्य, ज्ञान र धनको वृद्धि हुन्छ ।
जुन घडेरी पूर्व र उत्तरतर्फ अग्लो र पश्चिमतिर होचो छ,। त्यस्तो घडेरीलाई दैत्यपृष्ठ (दैत्यढाडे) घडेरी भनिन्छ । यस्तो ठाउँमा आवास बनाउनाले हानी हुन्छ । विशेष गरेर चौपाया, सन्तती र आर्थिक पक्षमा समस्या उत्पन्न गराउँछ ।
पश्चिम–पूर्वमा लामो सोतो भएको, माझमा होचो, दक्षिण–उत्तरमा अग्लो भएर उठेको घडेरीलाई नागपृष्ठ (नागढाडे) घडेरी भनिन्छ । यस्तो घडेरीमा आवास बनाउनाले घरमूलीको स्वास्थ, आफन्त, बन्धु–बान्धवसँग झै–भगडा र दुःख हुन्छ । मुख्य गरेर उपयुक्त चार प्रकारका घडेरी बाहेक अरु गोवीथी, गजवीथी, यमवीथी, भूतवीथी, वैश्वानरवीथी, धनवीथी आदिमा पनि विभाजन गरेको पाइन्छ ।
जुन भूमि जलथल (भासयुक्त) परेको, हिलो, पानीको गन्ध आउने फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ, दुर्गन्धयुक्त स्थानमा छ, त्यस्तो भूमिलाई निकृष्त भूमि भनिन्छ । यस्तो भूमिमा आवास बनाउनाले सुख प्राप्ती हुँदैन र
यसरी आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा लगानी गरेर बनाउने घरको घडेरी किन्दा नै धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसमा पनि प्रमुख कुरा घरसम्म पुग्ने बाटो पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । घडेरी किन्दा पहिला घरबाट पर्ने दिशाहरुमा पनि प्रष्ट ज्ञान हुनुपर्छ । साथै, घरबाट कता कता बाटो, वृक्ष, डाँडा, मन्दिर पर्छन् यस बारेमा पनि प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।
– आचार्य वासुदेव शास्त्री ‘वैदिक ज्ञान–विज्ञान’ पुस्तकबाट साभार